Fitaovana fanatobiana fanatobiana, fametahana lavaka fanasan-davenona, volo fisondrotam-bidy fanampiny, marika fanalefahana fanalefahana amin'ny fepetra takiana aminao
Home > Products > Lehilahy mamelatra
Ny vokatra avy amin'ny Lehilahy mamelatra , mpanofana manokana avy any Shina, Lehilahy mamelatra , Fanamboarana fantson-drongony mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fitaovana fanitarana fanampiny R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Ny akofa boribory, ny tànan'ny fametahana marenina dia marefo ny vy, anatiny sy ivelany. Mpandrindra lehibe avy amin'ny habe iray miakatra amin'ny manaraka na misisika mankany amin'ny roa lehibe lehibe (izany hoe 2- rantsan'i MT); Izany dia mamela ny No.2. Ny fametahana marika amin'ny rantsan-tanana mba hampiasaina ho an'ny No.3. Matetika dia misy rantsan-tànana maromaro no miara-miasa mba hahazoana ny mari-pahaizana Morse.
Ny akanjon'olom- borona koa dia antsoina hoe boribory fanantonana, fitaovana fitondra-tanana. - ho an'ny latabatra mihetsiketsika, fametahana milina fametahana milina, fametahana fametahana milina fanoratana, fametahana fametahana fametahana masaka, setriny manify, 7: 24NT miova androfana, marsezy ravina marika, ny ralady lava r8.
Ny fitaovana amidy dia ampiasaina matetika amin'ny latabatra, ny milina fanontam-pirinty, ny famonoana milina, ny milina fanolorana, ny famonoana milina.
Lehilahy mamelatra Fanamboarana fantson-drongony Fitaovana fanitarana fanampiny Taper Taper Drill Ny kofehy manjelanjelatra
Fitaovana fanitarana fanampiny
Taper Taper Drill
Ny kofehy manjelanjelatra